ဇနီးဖြစ်သူအတွက် ချီးကျူးစကားဆိုလာတဲ့ ပြေတီဦး
စိတ်ချမ်းသာဖို့က အဓိက ပါတဲ့။
အိန္ဒြာကျော်ဇင်က အီတလီနိုင်ငံထုတ် The Bridge ဆိုတဲ့ အိတ် နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့က စပြီး တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခွင့်ရလို့ ပျော်ရွှင်နေပါတယ်တဲ့.. ဒီ့အတွက်ကြောင့်လည်း ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ပြေတီဦးက အားပေးစကားပြောပြလာပါတယ်.
သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ အိန္ဒြာကျော်ဇင်က အီတလီနိုင်ငံထုတ် The Bridge ဆိုတဲ့ အိတ် နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့က စပြီး တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်. ဒီလို ဆောင်ရွက်လိုက်ရတဲ့အပေါ် ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ပြေတီဦးကတော့ အကုန်အကျသက်သာလို့ ပျော်နေတယ် လို့ မီဒီယာတွေရဲ့ အင်တာဗျူးမှာ ဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်.
'' ယောကျ်ားက ဒီအလုပ်ကို လုပ်တော့ သူအရမ်းပျော်သွားတယ်. အစ်မက ဒီအိတ်ကို မလုပ်ခင်မှာကျတော့ တခြား Brand တခြားအိတ်တွေ သူဝယ်ပေးရတာပေါ့. သူဝယ်ပေးရတော့ ပိုက်ဆံကုန်တယ်လေ. အခုကျတော့ အစ်မက ဒီအလုပ်ကို လုပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ တခြားအိတ်တွေကို မကိုင်တော့ဘူး. ကိုယ်ကလည်း ဒီ Brand ကို ကြိုက်ပြီးကိုင်တာဆိုတော့ သူဝယ်ပေးစရာမလိုတော့ဘူး ပိုက်ဆံကုန် သက်သာသွားတယ်. အရမ်းသဘောကျသွားတယ်. မိန်းမတဲ့ အစောကြီးကတည်းက ဘာလို့ မလုပ်တာလဲတဲ့'' လို့ ဆိုပါတယ်.
ပြေတီဦးက ဇနီးဖြစ်သူရဲ့ စီးပွားရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ပံ့ပိုးပေးတာမျိုးတွေရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်. တကယ်ဆိုရင် အိမ်ထောင်ကျကတည်းက ဒီလို လုပ်ရမှာ လို့လည်း ဒီဇင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့က The Bridge အိတ် မိတ်ဆက်ပွဲမှာ အရွှန်းဖောက် စနောက်ခဲ့ပါသေးတယ်.
'' အမှန်ဆိုရင်တော့ အိမ်ထောင်စကျကတည်းက လွန်ခဲ့တဲ့ ၈ နှစ်လောက်ကတည်းက ဒီအလုပ်ကို လုပ်သင့်တယ်. သူက ဒီ Brand ကို အရမ်းသဘောကျပြီးတော့ ဒီအိတ်ပဲ တော်တော်များများ ကိုင်တော့တယ်လေ. တခြား Brand တွေ သိပ်မကိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ ကျွန်တော်က တအားသဘောကျတယ်. သူနဲ့က တော့ အကြံဉာဏ်တောင်းတာလေးတွေ အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တိုင်ပင်တာလေးတွေကိုတော့ အကြံဉာဏ်ပေးဖြစ်ပါတယ်''
အိန္ဒြာကျော်ဇင်က ဒီလို အနေအထားတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်ဖို့ကိုလည်း အားသွန်ခွန်စိုက် ကြိုးပမ်းခဲ့ရတယ်လို့ပြေတီဦးက ဆိုပါတယ်. ဒီ့အတွက်ကြောင့် ဇနီးဖြစ်သူ အတွက် အားပေးစကား ဆက်လက် ပြောပြလာပါသေးတယ်.
'' ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူလုပ်တဲ့အခါမှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် သူလုပ်တယ်. အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြင်ဆင်တယ်. ဒီတစ်လလောက်ဆို ကျွန်တော်နဲ့ ကောင်းကောင်းစကားမပြောဖြစ်ဘူး. သူ့အလုပ်ပေါ်မှာ ဘယ်လောက်ထိ စိတ်နှစ်ပြီး ကြိုးစားထားတယ်ဆိုတာလည်း မြင်နေရတော့ သူ့ကို ချီးကျူးပါတယ်. မိန်းမ စိတ်ချမ်းသာရင် အရာအားလုံး ပြီးပြီ'' လို့ သူကဆိုပါတယ်.